စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံမှာ အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင် ပို၍လေးစားစရာကောင်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Lianhe Zaobao ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ဟန်ကျိုးမြို့ရှိ ဟိုတယ်ကွာရန်တင်းနေရာတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၁ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
စင်ကာပူ ၊ ဧပြီ ၁၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
စင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းက အာရှပစိဖိတ်ဒေသအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံထက် တရုတ်နိုင်ငံကို များစွာ ပို၍လေးစားစရာကောင်းကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု တရုတ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည့် Lianhe Zaobao သတင်းစာက တနင်္လာနေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုတွင် စောလျဉ်းစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း ၊ ကြေညာခြင်း နှင့် COVID-19 ရှင်းလင်းခြင်းများ မလုပ်ဆောင်ခဲ့ဟူသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့် အမေရိကန်က တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အများဆုံး အပြစ်ပုံချမှုပြုလုပ်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုဧပြီလအစောပိုင်းတွင် Wall Street ဂျာနယ် အယ်ဒီတာဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပြုလုပ်သည့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီက အထက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ ဒါပေမယ့် တစ်လထဲမှာပဲ သူတို့(တရုတ်)ဟာ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြခဲ့သလို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကလည်း တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေ အရေးတယူ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်” ဟု လီကဆိုသည်။ “ အချို့တွေ ချက်ချင်းတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေကြချိန်မှာ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွေကတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေ မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Keyword – Singapore, #PM, #China, #COVID-19, #xinhua, #xinhuamyanmar, #
Singapore PM says Pacific region more respectful of China’s handling of COVID-19 — Lianhe Zaobao
SINGAPORE, April 11 (Xinhua) — Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong said that the Pacific region isalot more respectful of what the Chinese did in handling COVID-19 than the Americans, the Singapore Chinese-language newspaper Lianhe Zaobao reported on Monday.
Lee said inadialogue with the Wall Street Journal Editorial Board earlier this April that the United States blames the spread of the virus mostly on China, saying that right at the beginning it did not promptly detect, declare and wipe out COVID-19.
“But withinamonth they did bring it out in the open and countries scrambled to react,” he said. “Some responded quickly, while others like the United States regret not reacting faster.” ■
Staff members and medics work inaquarantine hotel in Hangzhou, east China’s Zhejiang Province, April 11, 2022. (Xinhua/Jiang Han)
ဟိုင်နန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဆိပ်ကမ်းတွင် ဘီလီယံနှင့်ချီတန်ဖိုးရှိသော စီမံကိန်းများ လက်မှတ်ရေးထိုး
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးအော်လင်းမြို့၌ ၇၂ နာရီအတွင်း ပစ်ခတ်မှု အနည်းဆုံး ၁၈ ကြိမ်ဖြစ်ပွားရာ လူ ၅ ဦးသေဆုံး